University of Southampton - Study in England. Waxbarashada UK
Country : siibay Kingdom
gaabinta : Soton
aasaasay : 1862
Ardayda (qiyaastii.) : 24000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Southampton
Qor at University of Southampton
The University of Southampton waa meel gaar ah oo dadka loo gaaro wax cajiib ah. Waxaan nahay a-hoggaamineed dunida, jaamacadda cilmi-degdeg ah, oo qurbaankii xoog waxbarasho, caanka ah ee aannu ku hal-abuurka iyo ganacsi. Tani waa madal weyn ka soo afaysto our diiradda la our istaraatijiyad cusub.
Waa istaraatijiyad aad u fudud. Waxay ku saabsan tahay rabitaanka our. Waxay ku saabsan tahay dhisidda our sumcad. Waxay ku saabsan tahay isagoo si fudud u khayr badan nala tartamaya ee waxa aannu ku samayn.
Central si guul ah oo istaraatijiyad iyo xoojineyso dhan ah hawlaha waa afar mabda ':
Collegiality: hal koox ka shaqeeya, qorsheynta iyo wada gaarsiiyo, xagga aragtidayada la wadaago.
Quality: had iyo jeer ku dadaalaya si loo gaaro ugu tayada sareeya ee wax kasta oo aan samayn.
caalamiyaynta: bixinta ee guud ahaan suuqyada caalamiga ah iyo dhismaha iskaashi xoog leh ururada kale ee keentay.
Sustainability: hubinta falalka noo horseedi in ay dhaqaale, jiritaanka bulshada iyo deegaanka.
The University of Southampton waa in hogaanka 1% jaamacadaha adduunka oo dhan. Waxaan nahay xarun caalami ah oo heer sare ah ee cilmi-baarista iyo waxbarashada.
Waxaan nahay jaamacadda cilmi-degdeg ah iyo xubin aasaase ah Group Russell ah. Waxaan ka helay aqoonsi Ballon guulaha iyo taariikhda of guulaha dunida-beddelo our.
Kuliyada Business, Sharciga iyo Art
meelaha Baridda iyo cilmi-baarista:
sharciga Internet, sharciga badaha, sharciga deegaanka, istaraatijiyad, marketing, maamulka ilaha aadanaha, dharka, muuqaallo kale, design fashion.
Southampton Law School faahfaahin Xidhiidh
Southampton Business School faahfaahin Xidhiidh
Winchester School of Art faahfaahin Xidhiidh
Kulliyadda Engineering iyo Bay'ada
Maqalka, sayniska dalaada, aeronautics iyo astronautics, injineernimada acoustical, injineernimada sokeeye, tamarta, injineernimada farsamada, sayniska markab.
Aeronautics, Astronautics iyo Engineering xisaabeed
Civil, Badda iyo Deegaanka Engineering iyo Science
Institute of Sound iyo gariirka Research
Kuliyadda Sayniska Caafimaadka
kansarka, palliative iyo dhammaadka daryeelka nolosha, nool iyo dayactirka firfircoon, hay'adda iyo bixinta daryeelka, tababar horumarin xirfadeed oo joogto ah.
Practice Professional ee Sciences Caafimaadka
Xarunta curinta iyo Hoggaanka in Sciences Caafimaadka
Qadiimiga, English, film, taariikhda, luuqadaha casriga ah, music, falsafada.
Nidaamo gudahood Humanities:
dhaqanka Guud, daawo-mareenka, cilmiga horumarineed, cilmiga kansarka iyo cudurada lafaha iyo wadajir, la mawduucyada cross-goynta ee immunology translational iyo stem cells iyo daawo regenerative.
Horumarka Aadanaha iyo Caafimaadka
Clinical iyo tijaabooyin Sciences
Daryeelka Aasaasiga ah iyo Sciences Population
Kuliyada Dabiiciga ah iyo Environmental Sciences
Biological Sciences: noole, Ecology iyo hannaanka adeegyada, Biology, Kiimikada noole, Biomedical Sciences, bayotechnoolajiyadda, Biology Developmental, Ecology, biosciences Environmental, ayidhi, Kelli oo gacanta biosciences, Neuroscience, Biology Plant, Farmashiiste iyo cilmi barasho xayawaan
Chemistry: soocista & Analytics, Biology Chemical, Xisaabeed Systems Chemistry, Electrochemistry, flow Chemistry, resonance magnetic, Qalabka, organic & imanba Avv, Chemistry Supramolecular
Ocean iyo Earth Science: cilmi dhul, Geophysics, oceanography, sayniska badda, biology badda, ecology badda, biogeochemistry badda, oceanography jirka, Palaeoceanography iyo Palaeoclimate, injineernimada xeebaha, Physical Oceanography iyo Dynamics Cimilada, Marine cilmi dhul iyo Geophysics, Kheyraadka Badda iyo Sharciga, badda chemistry, laf Palaeontology, deegaanka iyo khayraadka Badda, geochemistry, dhaqdhaqaaqa badda, paleoceanography, paleoclimatology
Sciences Dabiiciga ah
Ocean iyo Earth Science, Oceanography National Center Southampton
Kuliyadda Sayniska Jirka iyo Engineering
meelaha Baridda iyo Research:
Electronics iyo injineernimada korontada, sayniska kombiyuutarka iyo IT, sayniska web, optoelectronics, physics iyo xiddigaha.
Electronics iyo Sayniska Kombiyuutarka
Kulliyadda Bulshada, Human iyo Xisaabeed Sciences
Waxbarasho, waxbaridda iyo waxbarashada, juqraafiga iyo deegaanka, dabaqay iyo saafi ah xisaabta, tirakoobka, cilmi hawl-, cilmi nafsiga, cilmiga bulshada, gabowga / gerontology, dhaqaalaha, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, tirakoobka bulshada iyo digga, cilmiga, siyaasadda arrimaha bulshada iyo criminology.
School Education Southampton
Juqraafiga iyo Deegaanka
The University of Southampton waxay leedahay asal ahaan sida Hay'adda Hartley, oo lagu sameeyay 1862 ka benefaction a by Henry Robinson Hartley (1777-1850). Hartley ka dhaxashay maal ka laba farcankii baayacmushtariyaasha khamri guul. At uu dhintay in 1850, ayuu ka tagav saan dhan £ 103,000 tagay si Corporation Southampton ee waxbarashada iyo horumarinta ee cilmiga ee uu hantida on Southampton ayaa Street Sare, bartamaha magaalada.
Hartley wuxuu ahaa hadhi ah lala yaabo, oo lahaa jeelahay yar oo ka mid ah guraan da'da cusub iyo tareennada ee Southampton. Ma uusan doonayaan inay abuuraan kulliyad badan (sida la aasaasay waqti la mid ah magaalooyinka kale Ingiriisi warshadaha iyo dekedaha ganacsi) laakiin xarunta dhaqanka ee Southampton ee aqoonyahanada caqliga. Ka dib markii caqabado sharci dheer in dardaaranka, iyo doodda dadweynaha sida in sida ugu wanaagsan ee tarjumo afka ah ee uu Will, Corporation Southampton ay doortaan in la abuuro Machadka (halkii college oo dheeraad ah si ballaaran la heli karo, in qaar ka mid ah dadka caanka ah ayaa gollayaasha).
On 15 October 1862, Machadka Hartley la furay by Rabbiga Ra'iisul Wasaaraha Palmerston in munaasabadda weyn madaniga ah kaas oo ka sii badnayeen in wax Muuqda in qof magaalada xusuusan karin. sano hore ee halganka dhaqaale ka dib markii, Machadka Hartley wuxuu noqday College Hartley ee 1883. biiro Taasi waxaa xigay tirada ardayda sii kordhaya, Macalimiin, ballaarinta ah oo ka mid ah goobaha iyo hoygeeda diiwaangashan ee ardayda.
In 1902, College Hartley wuxuu noqday ee jaamacadda University Hartley, laanta abaal marinta degree of the University of London a. Tani waxa ay ahayd ka dib markii kormeerka ee waxbaridda iyo dhaqaalaha Guddiga Jaamacadda Deeqaha College, iyo deeqaha xubnaha Golaha (oo ay ku jiraan William Darwin ka dibna haye ah). in la kordhiyo tirada arday ee sannadaha soo socda ku howl-gasha dadaalka ururinta lacagta ay u guuraan kulliyadda si Greenfield dalka ku wareegsan Back Lane (hadda University Road) degaanka Highfield ee Southampton. On 20 June 1914, Viscount Haldane furay goobta cusub ee loo baxshay Southampton University College. Si kastaba ha ahaatee, dillaacay of War World koowaad ee lix asbuuc ka dib loogu tala galay muxaadarooyin ma jiro qaadan kartaa meel, sida dhismayaasha ayaa lagu wareejiyey masuuliyiinta kulliyadda loo isticmaalo sida isbitaal military. Si aad ula qabsan mugga khasaaraha, buulasha alwaax ayaa ka taagay dambe ee dhismaha,. Kuwan waxaa ku deeqday jaamacad by Office War ka dib dhamaadka dagaalka, in waqtigii kala iibsiga ka dhismaha wadada sare ee 1920. Xiligaan, Highfield Hall, a gurigii hore ee dalka wuxuuna idinka Cafiyi wax Southampton Common, kaas oo kiro hore gacanta lagu dhigay, isticmaalka la bilaabey sida hoolalka ah joogitaanka ardayda dhaddig. South Hill, waxa hadda ka Complex Glen Eyre Hoolka ayaa sidoo kale helay, oo ay la socdaan South Stoneham guri ilaa guri ardayda lab.
ballaadhinta dheeraad ah iyada oo 1920 iyo 1930 waxaa suurtogal ka dhigay deeq-bixiyeyaal gaar, sida labada gabdhood ee Edward Turner Sims dhismaha maktabadda jaamacadda, oo ka mid ah dadka Southampton, awood dhismayaasha cusub ee labada dhinac ee Road University. Inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida jaamacadda dhaawac ee kala dhantaalay Southampton la bambooyin caga on campus iyo hoolalka ay of college residence.The go'aansaday geeddiga, halkii la ballaariyo Department ay Engineering, School of Navigation iyo horumarinta School cusub ee Radio Telegraphy. Hoolalka deggan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu hooy Polish, Ciidamada Faransiiska iyo Maraykanka. Ka dib markii dagaalkii, waaxyaha sida Electronics koray sarkhaansan Erich Zepler iyo Institute of Sound iyo gariirka la aasaasay.
On 29 April 1952, Queen Elizabeth II oggolaaday University of Southampton Charter Royal a, marka hore in la siiyo si ay jaamacad lagu jiro iyada boqornimadii, kaas oo u sahlay in ay darajo abaalmarinta. Lix kulliyadaha la abuuray: Arts, Science, Engineering, dhaqaalaha, Waxbarashada iyo Sharciga. University hore ee darajo Southampton lagu abaalmariyey on 4 July 1953, soo socda ballan ka mid ah Duke ee Wellington sida Chancellor jaamacadda. Tirada Ardayda iyo shaqaalaha koray soo socda labaatan sano oo dhan sida jawaab u Report Robbins ah. campus ayaa sidoo kale si weyn u koray, marka in July 1961 jaamacad la siiyay ogolaansho ah in ay helaan qaar ka mid ah 200 guryaha on ama meel u dhow xerada Golaha Degmada. Intaa waxaa dheer, Caqlina dheeraad ah iyo waaxyaha ayaa waxaa aasaasay, oo ay ku jiraan caafimaadka iyo Oceanography (inkastoo ay ku dhiiri gelin ee Sir John Wolfenden, Guddoomiyaha Guddiga Deeqaha University). Guryaha ardayda ayaa la ballaadhiyey oo dhan 1960 iyo 1970-barashada ee ay dubaan, Chilworth iyo dhismayaasha cusub ee kaxeynayo Glen Eyre iyo Montefiore.
In 1987, dhibaato horumariyo marka Guddiga Deeqaha University ee ku dhawaaqay, oo qayb ka ah dalka oo ku jartay, taxane ah oo hoos maalgelinta ee jaamacadda. Si aad u baabi'iyo ku khasaaraha la filayo, miisaaniyadda iyo yarida hoosaadka la soo jeediyey yareynta tirada shaqaalaha. Hindisaha waxaa la kulmay bannaanbaxyo on campus, waxaana markii dambe su'alaha (si loo yareeyo xad dhaafka ah iyo dib u qoondaysaa dhimista ee maalgelinta kulliyadood) ka dib markii loo diiday by Senate jaamacadda.
By bartamihii 1980-maadkii ilaa 1990, Jaamacada eegay si loo ballaariyo la dhismayaasha cusub on campus Highfield ah, horumarinta goobta Chilworth Manor galay park sayniska iyo goobta shirka, furitaanka Xarunta Oceanography Qaranka goob dockside iyo iibsiga dhul cusub oo ka kala socda Golaha City ee Arts Kuliyadda iyo beeraha sports (at Campus Avenue iyo Lane Wide, siday u kala horreeyaan).
Ma rabtaa wada hadlaan University of Southampton ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Southampton rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Southampton
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Southampton.
jaamacadaha kale ee siibay Kingdom